Mon, Jun 1, 2020 at 8:43pm
ओमानविरुद्ध नेपालले गर्‍यो १ सय रन पूरा
बुधबार, माघ २२, २०७६ साल
काठमाडाैं, २२ माघ । आइसिसी विश्वकप लिग-२ काे उद्घाटन खेलमा ओमानविरुद्ध नेपालले १ सय रनकाे लक्षय पूरा गरेकाे छ । बुधबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ३३ ओभरमा १ सय १२ रन पूरा गरेको हो। नेपालका लागि उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३६ रन जोडेर आउट भए। ३६ रन जोडेका सरद भेषावकर अविजित छन्। उनलाई १७ रन जोडेका विनोद भण्डारीले साथ दिइरहेका छन्। अब..
ओमानविरुद्धको पहिलो खेलमा करण केसीले लिए दुई विकेट
काठमाडाैं, २२ माघ । नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक सिरिजअन्तर्गत उद्घाटन खेलमा ओमानविरुद्ध खेिलरहेकाे छ । ओमानविरुद्धकाे पहिलाे खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले बलिङ गरिरहेको छ । १७ ओभरको खेल सकिँदासम्म ओमानले तीन विकेट गुमाउँदै ४७ रन बनाएको छ । ओमानका लागि जेशान मकसुद र मोहम्मद नदीम क्रमशः १२ र पाँच रन बनाउँदै खेलिरहेका छन् । ओमानका जतिन्दर सिंह र खवार अली एकोहोरो अङ्कमै..
नेपालले क्रिकेट लिग–२ को उद्घाटनमा ओमनसँग खेल्ने
मंगलवार, माघ २१, २०७६ साल
काठमाडौं, २१ माघ । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई प्रतियोगिताको उद्घाटनमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले ओमनसँग खेल्ने भएकाे छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भोलिदेखि शुरु हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि ओमन र अमेरिका नेपाल आइसकेका छन् । नेपालले आफ्नो उद्घाटन खेलमा ओमनलाई पराजित गर्दै जीत निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानम उत्रनेछ । यही माघ २९ गतेसम्म चल्ने खेलमा नेपाल, ओमान र अमेरिकाले त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछन्..
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक उमेश पटवालद्वारा राजीनामा
सोमबार, माघ २०, २०७६ साल
काठमाडौँ, २० माघ विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत अमेरिका र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृंखलाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक उमेश पटवालले राजिनामा दिएका छन् । तलबप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै पटवालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल - आईसिसीलाई राजिनामा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहेका बेला आईसीसीले पटवाललाई नेपाली टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनको मासिक तलब सात हजार डलर थियो।..
त्रिकोणात्मक सिरिजमा सन्दीपले विकेट लिँदा रंगशालाको खातामा पैसा !
आईतवार, माघ १९, २०७६ साल
१९ माघ, काठमाडौं क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले चितवनमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मदानको लागि सहयोगको घोषणा गरेका छन् । उनले यही माघ २२ देखि शुरु हुने अमेरिका र ओमान सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजमा लिने विकेटबाट रकम दिने घोषणा गरेका छन् । सन्दीपले अमेरिका र ओमानविरुद्ध लिने प्रत्येक विकेट वापत ८ हजार ८४८ रुपैयाँ क्रिकेट रंगशालालाई दिने बताएका हुन् । उनले नेपालमा रहेको सर्वोच्च शिखर..
भारतीय क्रिकेट टाेलीलाई आईसीसीकाे कारबाही : ४० प्रतिशत म्याच फी कटाैती हुने
शनिबार, माघ १८, २०७६ साल
लन्डन, १८ माघ भारतीय क्रिकेट टाेलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले स्लाे ओभर रेटका कारण खेलाडीहरुकाे पारिश्रमिकमा ४० प्रतिशत कटाैती गर्ने भएकाे छ । वेलिङ्टनमा भएकाे न्युजिल्यण्डविरुद्धकाे चाैथाे टी-२० खेलमा स्लाे ओभर रेटमा बलिङ गरेका कारण याे कारबाही गरिएकाे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले जनाएकाे छ । आईसीसीका अनुसार विराट काेहलीकाे कप्तानीमा भएकाे याे पहिलाे र सबैभन्दा ठूलाे कारबाही हाे । खेलाडी तथा खेलाडीका लागि सहयाेयगी..
एपिएफलाई हराउँदै मछिन्द्र शीर्षस्थानमा उक्लियो
काठमाडौं, १८ माघ पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल एपिएफ क्लबलाई पराजित गर्दै मछिन्द्र क्लब कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । पहिलो हाफमा १-० ले पछाडि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गर्दै मछिन्द्रले २-१ को जित दर्ता गरेको हो । २१अौं मिनेटमा आशिष लामाको पासमा प्रदिप लामाको प्रहारलाई मछिन्द्रका गोलरक्षक बिशाल श्रेष्ठ पञ्च गर्दै बचाए । लगत्तै नवीन लामाको..
एसिसी पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा
शुक्रबार, माघ १७, २०७६ साल
काठमाडौँ, १७ माघ नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले एसिसी पूर्वी क्षेत्रीय पुरुष टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि आज १८ खेलाडी छनोट गरेको छ । आगामी फागुन १५ देखि २३ गतेसम्म थाइल्यान्डमा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि क्यानले सार्वजनिक गरेको टोलीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान), पारस खड्का, विनोद भण्डारी, करण केसी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कमलसिंह ऐरी, आरिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, अभिनाश बोहोरा, पवन सराफ, कुशल मल्ल, सन्दीप..
चितवन प्रिमियर लिग शुरु
चितवन, १७ माघ चितवन प्रिमियर लिग टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि नारायणगढको क्याम्पाचौरमा शुरु भएको छ । प्रतियोगिताको राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले उद्घाटन गर्दै क्रिकेट खेलले नेपालमा विस्तारै गति लिँदै गएको बताउनुभयो । खेल क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडी, प्रशिक्षक र समर्थकको सहयोग तथा त्याग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले खेल क्षेत्रमा लागेका खेलाडीले अनुशासनलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक..
विस्फोटक ब्याट्म्यान क्रिस गेल 'ईपीएल' खेल्न नेपाल आउँदै
बिहिवार, माघ १६, २०७६ साल
काठमाडौं, १६ माघ विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट खेलाडी क्रिस गेलले नेपालमा आयोजना हुन लागेको एभरेष्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट (ईपीएल) खेल्ने पक्का भएको छ । वेष्ट इन्डिजका अलराउण्डर गेलले पोखरा राइनोजबाट एभरेष्ट प्रिमियर लिग खेल्ने पक्का भएको हो । पोखरा राइनोजले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मार्की खेलाडीका रुपमा गेललाई भित्र्याउन लागेको जानकारी दिएको छ । योसँगै युनिर्भसल बोसका नामले समेत परिचित गेल नेपाल..
अफगानिस्तानका साहजादले चितवनबाट ईपीएल खेल्ने
बुधबार, माघ १५, २०७६ साल
काठमाडौं, १५ माघ अफगानिस्तानका पूर्वविकेट किपर महम्मद सहजाद चितवन टाइगर्समा अनुबन्ध भएका छन्। उनलाई एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) का लागि टाइगर्सले आफ्नो टोलीमा भित्र्याएको हो। ईपीएलले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर मार्फत् सहजादलाई चितवन टाइगर्सले टोलीमा समावेश गरेको पुष्टि गरेको हो। ३३ वर्षीय दायाँ हाते ब्याट्स्म्यान सहजादले ६५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० खेलमा १ हजार ९ सय रन बनाएका छन्। सबै खेल अफगानिस्तान राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका..
ए डिभिजन लिग–सङ्कटामाथि मनाङको जित
काठमाडौँ १५ माघ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा साविक विजेता मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लबले सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ) कम्प्लेक्सको मैदानमा आज सम्पन्न खेलमा मनाङले सङ्कटालाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । मनाङले खेलको ४२औँ मिनेटमा सङ्कटाका खेलाडी अमित तामाङको आत्मघाती गोलबाट शुरुआती अग्रता बनायो । अञ्जन विष्टको हेड बल क्लियर गर्ने..
एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि खेलाडीहरु रिलिज तथा अनुबन्धन
मंगलवार, माघ १४, २०७६ साल
काठमाण्डाै, १४ माघ आसन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि विभिन्न टिमले खेलाडी रिलिज तथा अनुबन्ध गरेका छन् । भैरहवा ग्लाडियटर्सले प्रकाश केसी र भुपेन्द्र थापा क्षत्रीलाई रिलिज गरेको छ भने विराटनगर वारियर्सले पुष्प थापा, विनोद लामा र रविन क्षत्रीलाई रिलिज गरेको जनाएकाे छ । यसैगरी चितवन टाइगर्सले पृथु बास्कोटलाई रिलिज गरेको छ भने काठमाण्डौ किंग्स इलाभेनले सिद्धान्त लोहनी, विक्रम कुमार भुसाल र पुरन विश्वकर्मालाई..
काठमाडौँ १४ माघ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटलब प्रतियोगितामा सरस्वती युवा क्लबले पहिलो जित दर्ता गराएको छ । अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको सरस्वती क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई ४–३ गोलअन्तरले परारजित गर्दै जारी लिगमा पहिलो जित दर्ता गराएको हो । जितसँगै सरस्वतीले ४ अङ्क जोडेको छ । सरस्वतीले यसअघि एउटा खेलमा बराबरी गरेको थियो । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको..
काठमाडौँ, १३ माघ एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) को साविक विजेता ललितपुर प्याट्रिओट्सले श्रीलंकाका उपुल थराङ्गालाई अनुबन्ध गरेको छ। आगामी मार्च १४ बाट सुरु हुने तेस्रो संस्करणको इपिएलका लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनै पर्ने नियमअनुसार थराङ्गालाई ललितपुरले अनुबन्ध गरेको हो। थरङ्‍गाले श्रीलंकाको १९औं एकदिवसीय टोलीको कप्तानका रूपमा टोलीकाो नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै ट्‍वान्टी-२० फर्म्याटमा थरङ्गा आठाैं कप्तान रहेका थिए। उनी कप्तान एन्जेलो म्याथ्युज घाइते भएपछि..
शहीद स्मारक लिग : मच्छिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा
काठमाडौँ, १३ माघ शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगअन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा मच्छिन्द्र क्लबले थ्री स्टार क्लबलाई पराजित गरी लिगको शीर्ष स्थानमा प्रवेश गरेको छ । दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मच्छिन्द्रले थ्री स्टारलाई २–० गोलले हराएको हो । मच्छिन्द्रका लागि रेजिन सुब्बा र विशाल राईले गोल गर्नुभयो । खेलको ३८औँ मिनेटमा रेजिनले गोल गर्नुभएको हो । पहिलो हाफमा थ्री स्टार गोलरहित रह्यो..
ए डिभिजन लिग : सशस्त्रमाथि पुलिसको जित, भोलाको निर्णायक गोल
काठमाडौं, माघ १३ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत साेमबार भएकाे खेलमा विभागीय टाेली एपीएफलाई हराउँदै अर्काे विभागीय टाेली नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ । पुलिसले सोमबार दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । पुलिसको जितमा भोला सिलवालले निर्णायक गोल गरे । भोलाले खेलको १३ मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो । त्यसअघि खेलको पाँचौ मिनेटमा भारत..
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा बास्केटबलका जादुगर कोबे ब्रायंटको निधन
काठमाडौं, १३ माघ । प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी कोबे ब्रायंटको निधन भएको छ । आइतबार अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भएको एक हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भएको छ । आफ्नो नीजी हेलिकोप्टरमा यात्रा गरिरहेका ब्रायंटसँगै उनकी १३ वर्षिया छोरी जियानासहित ९ जनाको पनि उक्त दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । संसारभरिबाट बास्केटबलका ५ महान खेलाडीको नाम लिइएमा कोबेको नाम पहिलो नम्बरमा लिइन्थ्यो । पाँचपटक नेशनल..
चर्चित खेलाडी ब्रायन्टसहित ९ जनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु
काठमाडाैं १३ माघ। चर्चित अमेरिकी बास्केटबल खेलाडी कोबी ब्रायन्टसहित ९ जनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको छ । ४२ वर्षीय कोबी १३ वर्षीया छोरी जियानासँगै अन्य ७ जना साथिभाईसँग निजी हेलिकोप्टरबाट क्यालिफोर्नियाको कालबासासमा यात्रारत रहँदा दुर्घटना भएको हो । राष्ट्रिय बास्केटबल एसोसिएसनले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा धेरै जसो समय उत्कृष्ट रहेका उनी ५ पटकसम्म एनबीए च्याम्पियन्ससमेत बनेका थिए । यसैकारण उनलाई बास्केटबल इतिहासकै महान खेलाडीको..
अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास छाडेर स्वदेश फर्कदै सन्दीप
आईतवार, माघ १२, २०७६ साल
काठमाडौँ, १२ माघ सन्दीप लामिछाने सोमबार स्वदेश फर्कने भएका छन् । अस्ट्रेलियाको बिग ब्यास लिग खेलरहेका सन्दीप बीचैमा स्वदेश फर्कन लागेका हुन् । जारी सिजनमा मेलवर्न स्टार्सका लागि सन्दीपले १३ खेल खेल्दै १५ विकेट लिएका थिए । सन्दीप नेपालको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नका लागि बिग ब्यास बीचमै छाडेर स्वदेश फर्कन लागेका हुन् । नेपालले आगामी माघ २२ गतेदेखि अमेरिका र ओमानसँग कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा..
वेष्ट इण्डिजका ड्वेन स्मिथले भैरहवाबाट ईपीएल खेल्ने
शनिबार, माघ ११, २०७६ साल
काठमाडौं, ११ माघ वेष्ट इन्डिजका ड्वेन स्मिथले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) खेल्ने भएका छन् । उनले भैरहवा ग्लाडिएटर्ससँग अनुबन्ध गरेका छन् । ३६ वर्षीय स्मिथले आफू नेपाल आउन आतुर रहेको बताएका छन् । उनले भने, सुरुआतमै नमस्ते नेपाल भन्दै सम्पूर्ण नेपाली समर्थहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । “मैले भैरहावा ग्लाडियर्टबाट खल्नेछु” उनले भनेका छन् । ३६ वर्षीय स्मिथले वेष्ट इण्डिजका लागि तिनै फरम्याटको क्रिकेट खेलिसकेका..
शहीद स्मारक लिग : ब्रिगेड ब्वाइजसित च्यासल विजयी
शुक्रबार, माघ १०, २०७६ साल
काठमाडौँ, १० माघ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगअन्तर्गत आजको दोस्रो खेलमा च्यासल युथ क्लब विजयी भएको छ । दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा च्यासलले ब्रिगेड ब्वाइजलाई १–० गोलले पराजित गरेको हो । च्यासलका लागि कप्तान सन्तोष साहुखलले निर्णायक गोल गर्नुभयो । सन्तोषले खेलको इन्जुरी समयमा गोल गर्नुभएको हो । डिबक्सभित्र ब्रिगेडका डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेको बललाई उहाँले गोलमा परिणत गर्नुभएको हो । यसअघि..
काठमाडौँ, १० माघ पाँचौँ आरबिबी एनभिए क्लब महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलमा आज भएको फाइनल खेलमा न्यु डायमण्ड क्लबलाई ३–१ सेटले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो । एपीएफले २५–२३, २५–२१, २३–२५ र २५–१८ अङ्कका साथ एपीएफले लगातार दोस्रो वर्ष उपाधि चुमेको हो । जीतसँगै उसले रु दुई लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।..
सोमपाल र बसन्तलाई आराम दिँदै नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा
काठमाडौं, १० माघ । कीर्तिपुरमा आयोजना हुने आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग २ का लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले शुक्रबार मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवाल र प्रशिक्षक जगत टमाटाको सल्लाहमा १४ सदस्यीय खेलाडी टोलीको घोषणा गरेको हो । टोलीमा कुशल मल्ल र कमलसिंह ऐरीले पहिलो पटक स्थान बनाएका छन् । अनुभवी खेलाडी सोमपाल कामी र बसन्त..
नेपालले सन् २०२१ मा हुने टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट सोझै खेल्न पाउने
काठमाडौँ, ९ माघ नेपालले सन् २०२१ मा भारतमा हुने टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट सोझै खेल्न पाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसीसीको टी-२० वरीयतामा १२ औँ स्थानमा रहेको हुँदा नेपालले सोझै ग्लोबल छनोट खेल्न पाउने भएको हो । १६ टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका लागि आइसीसी च्याम्पियनस ट्रफी खेल्ने आठ टिमले सोझै स्थान बनाउनेछन् । अरु टिमले भने क्षेत्रीय छनोट प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ । जसका..
काठमाडौँ अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिनुभएको छ । पोखराको लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको भण्डारढिक खेल मैदानमा मंगलबार आयोजित मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटस्थलमा सांसद गुरुङले एन्फा अध्यक्ष गुरुङलाई झापड हान्नु भएको थियो । खेल मैदानमा नै कुटपिट गरी अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उहाँले जाहेरी दिनुभएको हो । जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी संहिता..
काठमाडौँ, ८ माघ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले पुलिसलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै विजयी भएको हो । मछिन्द्रको जितमा रञ्जित धिमालले निर्णायक गोल गरे । उनले खेलको ५२औँ मिनेटमा करीब ३० यार्डबाट प्रहार गरेको फ्रि किकबाट उत्कृष्ट..
काठमाडौँ, ७ माघ क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ । क्यानले अमेरिका र ओमानसँगको सिरिजपछि खेलाडीको श्रेणी बनाएर तलब बढाउने गृहकार्य थालेको हो ।गएको महिना बसेको क्यानको बैठकमा समेत खेलाडीको नयाँ श्रेणी बनाउँदै तलबमा वृद्धि गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । खेलाडीको तलबमा कति वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा अर्को बैठकको छलफलबाट टुंगो लाग्ने क्यानले जनाएको छ ..
काठमाडौं, ७ माघ सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बाट एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङ कुटिएका छन् । मंगलबार खोलमैदानमा नै सांसद दीपक मनाङेले अध्यक्ष गुरुङलाई कुटेका हुन् । मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको समयमा व्यवस्थापन नमिलाएको भन्दै गुरुङले हात हालेको बताइएको छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार खेलको नियम नबुझी आफूमाथि कुटपिट गरेको बताए । सांसद गुरुङले भने ‘आयोजकले बदमासी गरेको छ। मनाङबाट प्लेअर..
विग ब्यासमा सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पाचाैँ स्थानमा
सोमबार, माघ ६, २०७६ साल
काठमाडौँ, ६ माघ अस्ट्रेलियामा जारी विग ब्यास लिगमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पाचाैँ स्थानमा उक्लिएका छन् । अहिलेसम्म १२ मध्ये एक खेलमा मात्रै बाहिर बसेका सन्दीपले विकेट संख्या १४ पुर्‍याएका छन् । दशौं स्थानमा रहेका सन्दीपले सोमबार सिड्नीविरुद्ध २ विकेट लिएपछि एकै पटक पाचाैँ स्थानमा उक्लिएका हुन् । सन्दीपले अहिलेसम्म ३८ ओभर बलिङ गर्दा १ ओभर मेडन राख्दै..
Results 1917: You are at page3of 64